एउटा निर्वाचन हार्दैमा डराउनु पर्दैन – eRoyaltimes
धान उत्पादनमा वृद्धि तर भाते बानीका कारण नेपालीलाई अपुग
महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, ललितपुर महानगरपालिका
– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे तपाईको धारणा बताइ दिनुस न ?
– तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घुस आफर काण्डलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
– मुलुकको समग्र परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
– राप्रपाहरू फुटेकै कारण कमजोर भएको त होइन ?
– कसका कारण राप्रपाहरू नमिलेको हो त ?
– यस पटकको उपनिर्वाचनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
– नेपालमा हिन्दु धर्म मान्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ भनिन्छ तर हिन्दु धर्मलाई वटम लाइन मान्ने पार्टीको मत किन घट्दै गएको हो ?
– भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुयाधुरालाई पनि राखेको छ । यस विषयमा राप्रपाले स्पष्ट रुपमा केही बोलेको छैन नि ?
– हिन्दु धर्म मान्ने पार्टीहरूलाई एकिकृत गर्नु पर्छ भनिन्छ तर यस विषयमा नेताहरूले गम्भीर चासो राखेको देखिदैन नि ?
– तपाई राप्रपाको ललितपुर महानगरपालिकाको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, त्यहाँको लागि के गर्दै हुनु हुन्छ ?
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे यहाँको विचार बताइदिनुस न ? हामी यथास्थितिमा एमसिसीको विरोधमा छौ । एमसिसीका केही कुरा कामलाग्ने छन, केहीवुधा सच्याउनु पर्ने खालकाहुन । त्यसैले यथास्थितिमा एमसिसीलाई पारित नगर्ने हाम्रो विचार छ । राजसंस्थाको पूनस्थापना पछि मात्रएमसिसीलाई पूर्ण रुपले कार्यान्वयनगर्नु उपयुक्तठानेको छु । किनभने अहिलेको गणतन्त्रमा राष्ट्रिय स्वाभीमानभएका […]
इन्टरनेट सम्बन्धि नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्छ ः हरिहर भण्डारी, प्रवन्ध निर्देशक होन्स्